Fanarenana ny Rovan’Antananarivo: « Tokony hifanaraka amin’ny lamina iraisam-pirenena », hoy ny APM | NewsMada
Fanarenana ny Rovan’Antananarivo: « Tokony hifanaraka amin’ny lamina iraisam-pirenena », hoy ny APM
Par Taratra sur 13/03/2020
Tamin’ny alalan’ny filohany, i Désiré Razafindrazaka no nanaovan’ny Aron’ny harem-bako-pirenena malagasy » na ny « Amis du patrimoine de Madagasikara » (APM ), fanambarana momba ny fanohizana sy fanarenana ny Lapan’i Manjakamiadana sy ny Rovan’Antananarivo. Tamin’izany no nilazany fa « Irarian’ny fikambanana « Amis du patrimoine de Madagascar » ny hanatevenana ny tetikasa ary ny hitohizan’ny ezaka ahafahana manarina, araka ny maha izy azy ny vakoka manan-tantara rehetra mandrafitra ny Rovan’Antananarivo. Izany dia tokony hifanaraka indrindra amin’ny fenitra sy lamina iraisam-pirenena mikasika ny fivezivezena ary ny fandrindrana rehetra amin’ny toerana natao handraisana olona maro (ERP, « Etablissement recevant du public »).
Nambaran’ny filohan’ny APM ihany koa fa « Mampirisika ireo manampahefana isan’ambaratonga rahateo ny fikambanana « Amis du patrimoine de Madagascar » ny amin’ny tokony hampiharana ireo lalàna manan-kery momba ny fananganana trano ao anatin’ny faritra an-tampon-tanànan’Antananarivo, izay eo am-pikarakarana ny hampidirana azy ho isan’ireo harem-bakoka iraisam-pirenena ny Unesco. Araka izany dia tsy tokony hahitana maritrano manaratsy endrika na manimba ny maha izy azy iny faritra iny ».
Nanao antso sy fanentanana ny olom-pirenena tsirairay ny APM « mba tsy hikely soroka fa hilofo hatrany eo amin’ny fanaraha-maso ny fitantanana sy ny fikajiana ny harem-bakoka iombonana izay nolovaintsika tamin’ireo razantsika ary mbola ho lovan’ny taranaka fara mandimby rahateo ».